Wasiir Juxa oo si rasmi ah uga hadlay uljeedka safarkiisa ee deegaanada Puntland – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir Juxa oo si rasmi ah uga hadlay uljeedka safarkiisa ee deegaanada Puntland
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo haatan safar ku maraya gobolada iyo degmooyinka maamulka Puntland ayaa sheegay in safarkiisu uu gogol xaar u yahay booqashadda la filaayo in madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu maalmaha soo socdo ku yimaado Puntland.
Wasiirka iyo wafti uu hoggaaminayo oo maalintii shalay si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa hore usoo maray Gaalkacayo, Garoowe, Eyl, Dangoroyo iyo Qardho, halkaasi oo kulamo kula soo yeeshay waxgaradka iyo maamulka goobahaasi.
“Waxaa marka hore idiin soo gaarsiinaya salaan aan idiinka wado madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, madaxweynuhu safar ayuu ku imaan doonnaa degaamada Puntland, haddii Alle idmo, annigu safarkaasi aynu hordhac u ahay, uljeedadu waxaa weeye inaan dadka isa sii wareeysano, aan ogaano dareenka ay qabaan oo aan u warano, iyaguna noo waramaan” Sidaas waxaa yiri wasiir Juxa.
Dhinaca kale, wasiir Juxa ayaa ka codsaday shacabka reer Puntland inay u diyaar-garoobaan soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo la filayo inuu safar lug ah ku maro dhammaan degaanada Puntland.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu soo gaaro deegaanada maamulka Puntland waxa uu halkaasi, kula kulmi doonnaa qeybaha kala duwan ee bulshadda iyo ciidamadda qalabka sida ee maamulkaas.
Ugu dambeyntii, wasiir Juxa ayaa booqday xarumaha dowladda ee ku yaalla magaaladda Boosaaso oo ay ka mid tahay dekedda weyn ee magaaladaas, xarunta dowladda hoose, gobolka iyo xarumo kale oo badan.